KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Baarlamanka Somalia oo kulan Xasaasi ah ku leh Golaha Shacabka, Caasimada Muqdisho
Saturday 20 June 2015 11:18
Muqdisho (KON) - Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa Maanta u fariisanaya Mooshin ka dhan ah Dowladda Kenya oo dhawaan loo soo gudbiyay Gudoonkooda.
Ajandaha Kulanka Baarlamaanka ayaa ah sidii ay uga doodi lahaayeen Mooshinka laga keenay Go'aanka Kenya ay Derbiga ugu dhisayso Gudaha dalka Soomaaliya, oo Dhisamihii socdo.
Xildhibaan Maxa'ed Cumar ayaa sheegay in Baarlamaanka uu Go'aan ka qaadan doono Xadgudubka Kenya ay ugu soo xadgudubtay Dhulka Soomaaliya, ee Derbiga ka dhisayso waliba iyadoo aan kusoo wareglin Dowladda Federaalka.
"Baarlamaanka wuxuu cadaynayaa Maanta Mowqifkiisa ku aadan Dhisamaha Derbiga Kenya ay ka dhisayso Xaduuda," ayuu yiri Xildhibaanka.
Magaalooyin ay kamid tahay Beled-Xaawo oo Shacabka halkaas ku nool Cawasho badan soo gudbiyeen, iyagoo sheegay in Guryahooda ay burburinayaan Ciidanka Kenya oo Baldoosaro wata.
Kenya ayaa ku andacoonaysa inay Derbiga ka dhisayso xadka si ay ugu sugta Amaankeeda, ugana hortagto Weerarada Kooxda Al shabaab.